Dugsiyada Soo-jiidashada - Rosemount-Apple Valley-Eagan ISD 196
Waxbarashada cusub ee qarniga 21aad
Waxaannu haynaa shan dugsi hoose, mid dhexe iyo laba dugsi sare oo fursado soo-jiidasho ah. Dugsiyada soo-jiidashada waa dugsiyo dawladeed oo bilaash ah oo lagu habbeeyo mowduucyo gaar ah oo loogu talogalay inay ka qaybqaatan danaha ardayda iyo fikradahooda. Deegaankeenna waxbarashada dugsiga soo-jiidashadu waxaa loogu talogalay in si guul ah wax loogu baro ardayda.
Waannu ku faraxsanahay deegaanka waxbarasho ee cusub ee aan ka abuurnay Degmada 196, iyo qaabka kale ee aan ula macaamilno ardaydeena waa barnaamijkeena soo-jiidashada. Inta la siinayo waalidiinta xulasho kordhin, dugsiyadeenna soo-jiidashadu weli waxay siiyaan manhajka aasaasiga ah ee degmada goobaha sayniska, xisaabta, farshaxanka luqadda iyo cilmiga bulshada.
Si aad u dhigato dugsiyadayada hoose iyo dhexe ee soo-jiidashada, iyo Dugsiga Daraasaadka Deegaanka, waalidiintu waa inay buuxiyaan codsi. Bakhtiyaa-nasiib ayaa loo qabtaa dhibcaha heerarka dugsiga hoose iyo dhexe. Soo gelitaanka Dugsiga Daraasaadaha Deegaanka waxay ku saleysan tahay tirada codsadayaasha.
Halkan ka daawo bandhigga Dugsiga Soo-jiidashada
Dalxiisa ama codso maanta!
Qoysaska doonaya inay ardaygoodu dhigtaan dugsiga magnetka degmada 196 ee 2022-23 waa inay codsadaan!
Daaqadda codsashada bakhtiyaa-nasiibka dugsiyada hoose - Way xidhan yihiin - Codsiyada hadda waxaa lagu dari doonaa liiska sugitaanka dugsiyada
Valley Middle School of STEM Daaqadda codsashada bakhtiyaa-nasiibka dhexe ee dugsiga - Way xidhan yihiin - Codsiyada hadda waxaa lagu dari doonaa liiska sugitaanka dugsiyada
Dugsiga Daraasaadka Deegaanka wuxuu u qaataa codsiyada si joogto ah.
CODSIGA DUGSIGA HOOSE
Dugsiyada Hoose ee Soo-jiidashada
Dugsiga Dhexe ee Valley ee STEM
Dugsiga Sare ee Apple Valley
Dugsiga Daraasaadka Deegaanka
Dugsiga Hoose ee Cedar Park Sayniska, Tiknoolajiyadda, Injineerinka iyo Xisaabta (STEM), Apple Valley
Ardayda Cedar Park waxay bartaan si ay ugu adeegsadaan mabaad’ida sayniska, tiknoolajiyadda iyo xisaabta nolosha dhabta ah. Waxaannu ku naalnaa halkan 7500 Whitney Drive, Apple Valley.
Dugsiga Diamond Path ee Daraasadaha Xiriirada Caalamiga ah, Apple Valley
Diamond Path, waxaannu ka soo saarnaa bulsho ah arday waxbarta oo hela aragti caalami ah oo lagu wanaajinayo adduunkeena. Waxaannu ku naalnaa halkan 14455 Diamond Path, Apple Valley.
Dugsiga Echo Parka ee Hoggaaminta, Injineerinka iyo Tiknoolajiyadda, Burnsville
Echo Parka waa deegaan waxbarasho oo loo dhan yahay kaas oo carruurtu la yaabi karaan, baari karaan, hal abuur ku sameyn karaan oo wax ku hoggaamin karaan. Waxaannu ku naalnaa halkan 14100 County Road 11, Burnsville.
Dugsiga Glacier Hills School ee Farshaxanka iyo Sayniska, Eagan
Macallimiinteena Glacier Hills ayaa baraya ardayda xirfadaha lagama maarmaanka u ah aqoonta iyo bulshada si ay u noqdaan kuwo cimrigooda wax barta, iyadoo diirada la saarayo farshaxanka iyo baarista sayniska. Waxaannu ku naalnaa halkan 3825 Glacier Drive, Eagan.
Dugsiga Hoose ee Oak Ridge ee Hoggaaminta, Deegaanka iyo Sayniska Caafimaadka, Eagan
Oak Ridge, ardayda waxaa awood loo siiyaa inay gaaraan filashooyinka sare, wada-shaqaynta iyo ixtiraamka. Waxaannu ku naalnaa halkan 4350 Johnny Cake Ridge Road, Eagan.
Dugsiga Dhexe ee Valley ee STEM, Apple Valley
Dugsiga Dhexe ee Valley ee STEM wuxuu diirada saaraa waxbaridda mufakiriinta bulshada caalamka iyada oo loo marayo gacan ku barasho oo ay weheliso barayaal xiiso leh. Waxaannu ku faaneynaa dedaalkeena aan ku hubinno shaqada koorsada adag ee la xiriirta iyo la samaynta xiriir wanaagsan dhammaan ardayda.
Waxaannu nahay bulsho kala duwan oo ah arday ku hawlan ka shaqaynta inay dhisaan xirfado, aqoon iyo dabci si loogu noolaado nolol muhiim ah. Ardaydu waxay ku kobciyaan xiisahooda goob wada-shaqeyneed oo loogu talogalay inay wax ku soo saaraan oo kula wadaagaan waxbarashadooda bulshada inteeda kale.
Manhajka Dugsiga Dhexe ee Valley ee STEM wuxuu si joogto ah u kobcinayaa si loogu daro tiknoolajiyadda waxbarasheed ee ardayda iyadoo weli dhammaystiran. Sayniska, xisaabta iyo injineerinka waxaa lagu miisaamay bani’aadantinimada, farshaxanka samaynta iyo midka muuqaaleed.
Waxaannu ku naalnaa 900 Garden View Drive, Apple Valley.
Dugsiga Sare ee Apple Valley, Apple Valley
Dugsiga Sare ee Apple Valley waa dugsi sare oo laga aqoonsan yahay gobolka iyo qaranka oo siinaya wax dadka oo dhan, oo ay ku jiraan manhaj adag, barnaamijyo farshaxan oo abaalmarineed iyo kooxaha ciyaaraha fudud ee horyaalka.
Shaybaarkayaga iyo sayniska, tiknoolajiyadda, injineerinka iyo xisaabtu waxay diirada saaraan hab fikirka muhiimka ah, hal abuurka, wax soo saarka iyo xallinta dhibaatada dhabta ah ee adduunka taas oo u diyaarisa ardayda waxbarashada dugsiga sare ee dambe iyo xirfadaha sare ee STEM ee la xiriira goobta. Bulshadeena waxbarashadu waxay u heellan tahay inay la tartanto shaqsiyaada si ay u gartaan awooddooda arday ahaan iyadoo la siinayo fursado tayo sare leh oo kala duwan oo loogu talogalay koritaanka caqliga, shucuurta iyo jirka.
Waxbarashada STEM waxay noqotay mid caan ah. 2014 Degmada 196 waxay heshay $2.99 milyan oo ah deeq federaal ah oo ka timid Waaxda Shaqada si loogu beddelo dugsigeenna inuu ku bixiyo sayniska, tiknoolajiyadda, injineerinka iyo xisaabta (STEM) afar sannadood.
Waxaannu ku naalnaa halkan 14450 Hayes Road, Apple Valley.
Dugsiga Daraasaadka Deegaanka, Apple Valley
Dugsiga Daraasaadka Deegaanka waa dugsi deegaan dawladeed oo ah dugsiga soo-jiidashada oo loogu talogalay ardayda bilowga iyo sare ee dugsiga sare. Waxay la leedahay iskaashi gaar ah Degmada 196, magaalada Apple Valley iyo Gobolka Minnesota (Minnesota Zoo). Hadafkeenu waa in la abuuro oo la dhiirigeliyo hoggaamiyayaasha bulshada ee fekerka leh ee al shaqeeya kuwa kale si ay u abuuraan adduun waara.
Dugsiga Daraasaadka Deegaanka, waxaannu aaminsanahay in isdhexgalka bulshadu yahay furaha waxbarashada. Bulshooyinka waxtarka leh waxay qiimeeyaan wada-shaqaynta, dabacsanaanta iyo is-ixtiraamka qofba qofka kale. Aragtiyo cusub ayaa lagu helaa isdhexgalka dhaqamada waxayna xoojiyaan xiriirka u dhexeeya dadka. Waxaanan aaminsanahay in waxbarasho firfircoon, khibrad leh ay tahay aasaas.
Waxaannu ku naalnaa halkan 12155 Johnny Cake Ridge Road, Apple Valley.